Farmaajo Gobolada Hawiye Kala Baxay Saraakiishi iyo CIidankii Mareexaan – KHAATUMO NEWS
Farmaajo Gobolada Hawiye Kala Baxay Saraakiishi iyo CIidankii Mareexaan
Madaxweynaha Mudo Xileedkiisu Dhamaaday ee soomaaliya Farmaajo ayaa guud ahaan Gobolada dalka soomaaliya ka saaray saraakiisha iyo ciidanka Beesha Mareexaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Gobolka Gedo ku celiyay Saraakiil iyo Ciidamo joogay Gobolada Dalka gaar ahaan Gobalada Hawiye
MD Farmaajo Ayaa dareemay sida loogu hayo saraakiisha iyo ciidamada Mareexan Carabka islamarkaana wuxuu dareemay in hadii uu booska ka baxo ama markasta xaaladu is badasho in lagu samayn doono ugaadhsi gaar ah ama beegsi gaar ah ciidanka iyo saraakiisha Beeshiisa.
Madaxweynihii Hore Farmaajo Ayaa guud ahaan ka saaray 24 saac ee u danbeeyay Dhuusamareeb.Guriceel.Baladweyne Jowhar Sarakiil iyo ciidan Beeshiiisa ah kuna celiyay Gedo kadib markii u ogaaday guluf coladeed oo kali ku ah Beeshiisa siiba inta ku garab taagan in uu ku sii joogo sharci daro Muqdisho.
Talaabadan uu Farmaajo qaaday ayaa sidoo kale imaanasa xili shaki weyn soo kala dhex galay Farmaajo iyo Xubnihii hawiye daacada uhaa sida Raysal Wasaare Rooble Cali Guudlaawe iyo xubno kale oo daacad u ahaa.
Farmaajo Ayaa sidoo kale Dareemay in Beesha Hawiye Wado olole xoogan oo aan dhan-ba u dhaafsiisne Beesha Mareexaan oo Isagu kow ka yahay,
Previous Post: 200 qoys oo danyarta iyo agoonta laascaanood oo raashin loo qeybiyay
Next Post: War Deg Deg Ah:puntland ka Eriday Garoowe Wariye Cabdimaalik Coldoon
Taasaa la leeyahey ha is raacdo???? Oo rajo aad ka sugeysaan.
Riyo maalmeedka ha idin macaanaato.
Awalba dad dano gaar ah lahaa baa keensaday, ma ahayn REAL LEADER.
caadifad, qabiil, been, buunbuunin, ismoogaysiin, diin yari, masayr Kablalax.
QOFNA MADAXIISA KAMA BOODO.
Farmaajo wuxuu noqday madaxweynihii ugu taageerada badnaa laakiin muxuu sameeyey?
in muwaadin soomaaliyeed uu itoobiya ka iibiyo,
in uu dastuurkii ku tuntay, inuu maammuladii dhisnaa burburiyo. inuu shacabka jubbaland dayaaradihii ka joojiyo, in uu baydhabo ku xasuuqo shacab soomaaliyeed oo banaanbaxayey. in uu ciidankii siyaasad u adeegsado. in uu isku dayo inuu xukunka dheeraysto oo waliba dad aan waxba galabsan ay ku dhinteen.
Hadduu innaba caqli leeyahay wuu is casili lahaa!!
laakiin ma dhicin. waana fursad kale oo ka luntay.
Talaabo uu qaado tana ugu macquulsanyd uguna fcnyd afarti sano uu xamar joogay